Carruurta kuraasta fadhiga
Carruurta Dib -u -fadhiisiya
Kuraas xumbo oo buuxa
Qaabka kubbadda Sofas
Sanduuqa kaydinta iyo saxaro
Qeybaha Sofa Qeybta
Sariiraha socod baradka
Sariiraha Xayawaanka Butros
Sariiraha Birta Xayawaanka
Maqaarku ma sameeyaa fadhiga saxaro xoqan sida loo hagaajiyo?
Sidee buu u hagaajiyaa sariirta dermal xoqan? 1, si loogu sameeyo fadhiga maqaarku inuu sii isticmaalo muddo dheer, waa inuu ka fogaadaa carruurta ku fadhida fadhiga, ku cayaarta alaabta carruurtu ku ciyaarto, iyo wixii la mid ah, si alaabta la xaday loo geeyo fadhiga. 2, fiiro gaar ah u yeelo nadiifinta fadhiga ee maalinlaha ah, oo leh shukumaan qoyan si aad u furto qallajinta nadiifinta qalajinta ...
Gurigu wuxuu leeyahay gacaliye, sidee qolka fadhiga loo qurxiyaa? Nabadgelyadu aad bay muhiim u tahay, madadaalada carruurtu waa lama huraan!
1, jooji miiska shaaha - ka bax qolka fadhiga Qolka fadhigu waa meel u bannaan hawsha qoyska, sidoo kale noqo meel bannaan oo leh meel ballaadhan oo guriga ah, maxaa yeelay kani waa maalin kasta marka laga reebo cunista cuntada oo la seexdo, wakhtiga ugu badan waa qolka fadhiga waxqabad. Haddii uu ilmo joogo guriga, waxaad ka fiirsan kartaa ...
Waa maxay sababta alaabta guriga ee alwaaxda adag ee carruurta ay u isticmaalaan alwaax geed?
Way fududahay in la isticmaalo geed. Waxaan samayn doonaa xoogaa ballaarin ah sida loo doorto geed. Waa sida soo socota: Pine maxaa yeelay xaabku waa dabacsan yahay, dufanku wuu badan yahay urka, ha noqon xulashada wanaagsan ee samaysa alaabta guriga. Laakiin waa raqiis. Carruurta alaabta guriga taal ee suuqa weli waa adduunka ...
Alaabta guriga carruurtu aad bay u weyn tahay, waxaana jira halis ka iman karta khaladaadka naqshadeynta
“Marka aad iibsaneyso alaabta guriga carruurta, waxaan maqlay inay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato geesaha wareegsan, oo aadan aad u fiirin faahfaahinta naqshadda. Maan filayn in carruurtu ay faraha ku dhegi doonaan godadka sariirta marka ay ciyaarayaan. Waa ter ...
Waa maxay sariirta ku habboon carruurta yaryar？
1. Sariir noocee ah ayaa ilmuhu ku habboon yahay? Qolka sariirta guud ahaan waxaa lagu xushaa da'da ilmaha, waxaana jira guud ahaan sariirta iyo sariirta. Sariirtu waxay ku habboon tahay dhallaanka hadda dhashay, sariirta noocan ahi waxay si fiican u ilaalin kartaa ilmaha. Laakiin marka ilmuhu si tartiib tartiib ah u weynaado, adkaanta ...
Waa maxay faa'iidada aan ka heli karno alaabta carruurta ee DIY？
Iyada oo waayo -aragnimo 13 sano ah u leh warshadaha alaabta carruurta, shirkadeena waxay ka fikiraysaa sida kaliya oo aan alaabada looga dhigin raaxo badan, caafimaad u leh carruurta, laakiin sidoo kale loo keeno ciyaaro badan, oo u shaqeyn kara carruurta iyo qoyska. Nooca ugu horeeya ee DIY waa gogosha saxaro saxaro leh, carruurtu waxay isku dayi karaan inay dhaqaajiyaan, ...
Ku soo dhawow si aad ugu soo biirto Barnaamijkeena Tooska ah ee ku saabsan Agabka Carruurta Xannaanada Agoosto 20, 2020
Sababtoo ah cudurka faafa ee fayraska corona, ma awoodno inaan la kulanno dhammaan macaamiisheena bandhigyada dhaqanka. Labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaan qabannaa in ka badan 15 show toos ah iyada oo loo marayo dhammaan noocyada kanaalada, sida carwada canton ee internetka, carwada internetka ee Alibaba. Waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo iibkeena cusub iyo kan kulul ...
Dad badan, eydu waxay la mid yihiin xubnaha qoyska.
Dad badan, eydu waxay la mid yihiin xubnaha qoyska. La joogista eeyga shaqada ka dib ayaa ah waqtiga ugu farxadda badan maalintii.Laakiin qaar ka mid ah milkiilayaasha ayaa ka walwalaya inay ilmaha seexdaan habeenkii, Waxaa laga yaabaa in la jajabiyo markay jeestaan, waxaana laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin xagga nadaafadda ah. Maalmahan, marka dadku iibsadaan alaabta xayawaanka, waxay m ...
Waa maxay naqshada ugu badan ee carruurta ee alaabta guriga 2020?
Waa maxay naqshada ugu badan ee carruurta ee alaabta guriga 2020? - alaabta qoryaha DIY waa inay ahaato hal doorasho oo wanaagsan. Dongguan City Baby furniture Co., Ltd. Waxay soo saartay taxane cusub oo alaabta guriga ah sanadkaan, taas oo aad u fiican in la dhigo meel kasta oo guriga ah, qolka jiifka carruurta, dugsiga barbaarinta. Cusub ee ...
Carwada tooska ah ee tooska ah
Sidee loogu soo bandhigaa naqshado cusub macaamiisheenna qiimaha leh sannadkaan oo kale oo aan hore loo arag ee 2020? Bandhigga Live wuxuu noqon lahaa mid ka mid ah siyaabaha wanaagsan. Bishii Juun, Dongguan City Baby furniture Co., Ltd. waxay qabatay in ka badan 20 bandhigyo toos ah oo leh madal madadaalo gobolka canton iyo Alibaba.com. Waa channel cusub si aad u ...
Dongguan City Baby Furniture CO., Ltd. waxaa wareystay TVS1 “Ganacsade Cantonese Saamayn leh” waxaana laga sii daayay dhammaan qeybaha shiinaha 10 -kii Nov, 2019
Dongguan City Baby Furniture Co., Ltd.
No.3, Wadada Dangkeng, Shangtun No.3 Aagga Warshadaha, Magaalada Liaobu, Dongguan, Shiinaha.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Reserved Rights.